China RCL-4502 Front-agibele amahhashi LED Linear Khanyisa ifektri abakhiqizi | Ukunethezeka
1.Embedded high-effciency LED izibani. Umzimba wesibani se-aluminium ingxube enamandla
2.kuziphatha futhi ayikhubazi, ithuthukisa ngempumelelo impilo yobuhlalu bezibani ze-LED
3.Donsa ngokusebenzisa inkatho. nge-lampshade: isetshenziselwa ukuphela kwangaphambili kwe-18mm ethambekele
4.layer ikhabethe izicathulo, ukujula -22mm ngokusho ukujula evamile.
I-5.Iyasetshenziswa nge-RCS-4501 rack rack yokusebenzisa ukusetshenziswa okuphezulu.
6.3000K ukukhanya okufudumele.
Ukukhanya kwemvelo okungu-7.4200k.
Ukukhanya okubandayo okungu-8.6000k.
Ungasikhetha kanjani isiteshi se-LED?
Umumo - U-shape ne-V-shape yizitayela ezimbili ezithandwa kakhulu. Ukuma kwe-U kuhle ukufakwa kobuso ngenkathi i-V-shape ilungele ukusetshenziswa kwekhoneni.
Usayizi - Qiniseka ukuthi isikhala sangaphakathi sanele umucu wakho we-LED. Uchungechunge lwe-muzata LU1 universal ngephrofayili ye-17x8mm lusetshenziswa ngokujwayelekile, kanti uchungechunge olukhulisiwe lwe-muzata Lwezidingo ezikhethekile. Mayelana ne-lengh, Sinikeza iziteshi ze-aluminium ngemitha eli-1 namamitha amabili.
Umbala - Sinezinhlanganisela ezahlukahlukene zemibala. Ungakhetha eyodwa oyithandayo noma ngokusho kombala wendawo kanye nenjongo.
Ukukhanya okuphezulu - Ngenhloso yokukhanyisa, ungakhetha ikhava yekristalu. Uma ufuna ukuqhubeka, uchungechunge lwemigqa emibili ingahlangabezana nesidingo sakho, zenzelwe ukufaka imichilo emibili ye-LED ukuthola ukukhanya okuphezulu.
Impilo ende futhi enokwethenjelwa-lokhu kukhanya komugqa kwe-LED kungasetshenziswa iminyaka emi-3. Uma udinga noma yikuphi ukwesekwa, sicela usithumele i-imeyili, ithimba lethu lochwepheshe ngemuva kokuthengisa lizoxazulula inkinga yakho ngesikhathi futhi likunikeze isixazululo esigculisayo esingu-100%.
I-cap design end smart evumela ukuqondisa okuphakelayo kwekhebula endaweni oyifunayo (emuva, ngakwesokunxele noma ohlangothini lwesokudla) ngenkathi uyigcina ifihliwe.
Ukuhlelwa okuhlukahlukene kwekhebula / kwezixhumi ukuze kuhambisane cishe nanoma yisiphi isimo sokufaka.
Langaphambilini I-RCL-2518 Light Linear Ebekwe Ngaphambili
Olandelayo: Isaphulelo Esijwayelekile China 150W Izinga Lokushisa Eliphakeme Ukumelana IP66 Amanzi Linear LED Flood Light
I-RCL-2518 Light Linear Ebekwe Ngaphambili